FREE ISEMTHETHWENI UNCEDO
Ixabiso mthetho ukuba enshrines ubukho balo free isemthethweni noncedo a kakhulu ngokubanzi amaqela abemi, amise ulawulo phezu ngqwalaselo zabantu ekuboneleleni free isemthethweni aid, norms ka-elinolwazi nobuntu kwaye neemfuno umgangatho iinkonzo, kwaye kanjalo imposes engqongqo iimfuno kuba elinolwazi iinkcukacha zabantu ekuboneleleni free isemthethweni uncedo.
Ulungiselelo free isemthethweni aid kufuneka kusekelwe imigaqo enjalo njengoko objectivity, ukungakhethi cala, ukufaneleka, ukulingana ka abemi ukufikelela uncedo kwaye ukugcina iimfihlo yakhe lungiselelo.
Abathabatha inxaxheba kuzo uluntu inkqubo free isemthethweni aid kukho Oluphezulu amagunya kwaye zabo subordinate amaziko, Oluphezulu amagunya ebhunga constituent karhulumente, urhulumente isemthethweni ii-ofisi, abaqondisi-mthetho kwaye notaries. Ngokungqinelana nomthetho i-imizimba ka-Oluphezulu amandla imimandla lokugqiba ukuseka nokuba babe urhulumente isemthethweni Bureau okanye involve ulungiselelo free isemthethweni aid abaqondisi-mthetho. Ngabo yenzelwe ukuqinisekisa isixa-mali kwaye umgaqo-nkqubo we yomvuzo wonyaka abaqondisi-mthetho kwaye imbuyekezo yabasebenzi zabo inkcitho kwi inikeza isixhobo free isemthethweni aid.